induction I-Brazing yeentonga zobhedu kwimichiza yokudibanisa
Ukungeniswa kweentonga zobhedu zeBrazil kwimitya yobhedu ukubuyisela indawo yokusebenza yetotshi. Inkqubo yangoku yetotshi ineziphumo zokungcoliseka okugqithisileyo kwindibano, kwaye ifuna ukuphinda iphinde yenzeke emva komsetyenzana wokungenisa impahla.
DW-UHF-10KW UMatshini OYILWAYO WOKUGQIBELA
Iiparamitha eziphambili - UVAVANYO 1
Amandla: 7.2 kW
Ixesha: I-avareji yexesha - imizuzwana engama-100
Ukulungiselela ukufakwa kwetafile yobhedu kwintonga yobhedu, i-EZ Flo 45 yocingo oluvuthayo lwalunqunywe kwii-2 ”ubude lwaza lwabekwa kwindawo yomda. Kwimeko yokuvelisa, kucetyiswa ukuba kusetyenziswe amazantsi e-EZ Flo 45. Iingqungquthela zamiselwa kwaye zafudumeza ixesha eliphakathi kwemizuzwana eli-100 yokuhamba kwe-alloy kunye nokufezekisa ukukhanya.
Amandla: 6 kW
Ixesha: Ixesha eliphakathi - imizuzu emi-2.5
Ukulungiselela ukufakwa kwentambo yobhedu kwipleyiti yobhedu, ii-EZ Flo 45 ezenziwe ngomthi zaza zahonjiswa zaba zii-2 ”ubude zaza zabekwa kwindawo yomda. Kwimeko yokuvelisa, kucetyiswa ukuba kusetyenziswe amazantsi e-EZ Flo 45. Iingqungquthela zamiselwa (jonga iifoto) kwaye shushu okwexeshana kangangemizuzu emi-2.5 yokuhamba kwealloy kunye nokufezekisa ukukhanya.
Ngenxa yokuchasana kwesinyithi okwahlukileyo phakathi kobhedu kunye nobhedu, ubhedu lobushushu lobhedu ngokukhethekileyo. I i-coil coil yenzelwe ukoyisa imivalo kwisahlulo secandelo ishushu izithsaba kwaye ubushushu buhanjiswa kwipleyiti ngakumbi ngoqhelaniso kunokuba kungeniswe imivalo kuqala ukufikelela kubushushu ngaphambi kweplate. Ukuba izixhobo ziyafana (usebenzisana nobhedu okanye ubhedu kubhedu, oku akuyongxaki.Ukuba ubhedu lubhedu kwaye ipleyiti yethusi lubhedu akukho micimbi-kuphela xa ibar ibhedu kwaye ipleyiti ilubhedu. Oku kufuna) Amandla okucuthwa ukuvumela ukubopha ukuhanjiswa kobushushu ukusuka kwintonga yobhedu kwiplate yobhedu.
Ukuze ungenise ipleyiti yokufaka ubhedu kwi-coupon kunye nentonga yobhedu. Kwimeko yokuvelisa, kucetyiswa ukuba kusetyenziswe amazantsi e-EZ Flo 45.
Iindibano zacwangciswa kwaye zafudunyezwa ixesha eliphakathi kwimizuzu emi-2 ukuhambisa ingxubevange kunye nokufezekisa isibambo.
ukukhangela ibhondi Amaqhinga aqinileyo ahlalayo
iindidi Teknoloji tags umatshini wokufaka ubhedu, ukufakwa kweplate yobhedu, ubhedu obhedu, Iintonga zobhedu ezi-bronze ubhedu, Iintonga zobhedu zokuqhola kumatshini wobhedu, ubhedu nobhedu, ukuxhonywa kwentonga yobhedu, hf ukujonga, ukutyunjwa kwebhondi inkqubo Post yokukhangela
into engenayo brazing yensimbi carbide cap ukuya shaft